Waxqabadka Xukuumadda Somaliland Q/1aad | Araweelo News Network | Araweelo News Network
Waxqabadka Xukuumadda Somaliland Q/1aad
Sannadka 1-aad ee Waxqabadka Xukuumadda Somaliland
Siyaasadda: Sannad ayey ku buuxdaa markii tallada dalka ay qabatay Xukuumadda uu hoggaamiyo Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, waxaana taariikhda u gashay Jamhuuriyadda Somaliland in xafladdii caleemo-saarka Madaxweynuhu uu xilka kula wareegayey 13kii December 2017kii, ay kulmisay saddex madaxweyne oo si dimuqraadi ah loo soo doortay oo xilka mid walba si salmi ah u wareejiyey markay dhammaatay muddadii xil hayntiisu.
Madaxweynaha Somliland Md. Muuse Biixi Cabdi oo si diiran loogu soo dhaweeyey Ceerigaabo
1- Xakameynta Isticmaalka Kharashyada Dawladda, si qiime dhaca looga ilaaliyo shilinka Somaliland, taas oo ay haatan suurtogashay inuu xasilo qiimaha shilinka Somaliland muddada sannadka ah.
2- Taakulaynta iyo u Gurmashada hadba inta awoodu tahay dhibaatooyinka halista ku ah nolosha iyo kuwa masiibooyinka dabiiciga ahi keenaan.
3- Ilaalinta Anshaxa iyo haybadda dawladnimo oo ay ugu horreeyaan in masuuliyiinta sar-sare ee Xukuumadda xafiisyadooda laga helo saacadaha shaqadda iyo in aanay Warbaahinta isku weydaarsan khilaafyada maamul ee ay ku kala aragti duwanaan karaan.
4- Dhiirigelinta iyo u jiheynta bulshada ee xagga wax-soo-saarka Beeraha, iyadoo beeralleyda laga taakuleeyey dhinaca beer qodaalka, isla markaana Xukuumaddu ka qaybqaadatay dhinaca wax-soo-saarka.
5- Dhawritaanka Haykalka dawladnimo; sida in bulshada reer Somaliland si siman loogu soo bandhigo, uguna tartamaan fursadaha shaqo ee dawladda iyo sidoo kale Qandaraasyada Qaranka.
6- Fuddudeynta hannaanka maalgashi ee dalka, iyadoo loo aasaasay Wasaarad u gaar ah.
7- Muddadaas sannadka ah waxa madaxweynuhu uu socdaalo ku kala bixiyey dalalka dibadda sida, Itoobiya, Jabuuti iyo Imaaraadka Carabta, waxaanu socdaalo ku tagey dalka gudihiisa min galbeed illaa bari, kuwaasi oo dhammaantood si weyn loogu soo dhaweeyey.
8- Waxa kaloo Madaxweynuhu uu ku qaabilay xafiiskiisa wufuud kala duwan oo booqashooyin ku yimid dalka, oo iskugu jira; Wasiirro, Safiirro iyo masuuliyiin sar-sare oo ka socda dalalka Somaliland xidhiidhka dhow la leh iyo Hay’adaha Qarammada Midoobay iyo kuwa caalamiga ah.
9- Madaxweyne Ku-xigeenka Somaliland Md. Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) iyo wefti uu hoggaaminayey oo ay ka mid ahaayeen Guddoomiyaha xisbiga UCID, Eng. Faysal Cali Waraabe, Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Sh. Khaliil Cabdilaahi Axmed, Wasiir Ku-xigeenka Warfaafinta Md. Maxamed Muuse Abees iyo Siyaasi Maxamed Nuur Caraalle (Duur) oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee xisbiga WADDANI, ayaa qasriga Boqortooyada Sucuudiga si maamuus leh uu ugu soo dhaweeyey Boqor Salmaan Binu Cabdicasiis madaxweyne Ku-xigeenka iyo weftigiisa.
10- Waxa kaloo Madaxweyne Ku-xigeenka iyo wefti uu hoggaaminayaa uu socdaal ku tagey dalka Imaaraadka Carabta, isagoo halkaas si rasmi ah uga furay magaalada Dubia xafiiska Safaarada Jamhuuriyadda Somaliland oo loo dalacsiiyey heerka diblomaasiyadda oo la mid ka danjirayaasha kale ee ku sugan dalkaas, waxaanu munaasibadaa goobjoog ka ahaa Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga ee Imaaraadka iyo Maareeyaha Shirkadda DP World.
11- Md. Cabdiraxmaan Saylici wuxuu booqashadiisii ugu dambaysay ee December uu ku tagey dalal ka mid ah Yurub, isagoo lagu soo dhaweeyey xarunta midowga Yurub ee Brussels, waxaanu kulan la yeeshay Xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka Midowga yurub oo saaxiibbo la ah Somaliland, kuwaasi oo ay ka wadahadleen arrimaha aqoonsiga Somaliland iyo xagga horumarinta mashaariicda Somaliland.
12- Sidaas si la mid ah Madaxweyne ku-xigeenku wuxuu lugtiisii ugu dambaysay ku soo maray boqortooyada dalka Ingiriiska, halkaas oo loogu soo dhaweeyey fadhi ay lahaayeen Guddi ka tirsan Baarlamaanka Ingiriisku oo uu ka qaybgalay dhegaysigii dooddii u socotay, kadibna kulan gaar ah la yeeshay xubno ka tirsan xildhibaannada Baarlamaanka UK oo ah kuwa taageera Qaddiyada Madax-bannaanida Somaliland.
Diiwaangelintii tiro-koobka shaqaalaha dawladda Somaliland